SomaliTalk.com » Faallo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya
Faallo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, June 4, 2012 // 2 Jawaabood
(Ee lagu wado in dhawaan Bisha Juun 2012 dhexdeeda la ansixiyo)
Diyaariye: Saciid Birmad cigaal
SOSCENSA Legal Adviser.
(LLB/LLM, Sharia and Law)
Soo jeedin Guud ahaan Dastuurka.
Haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay’adaha guud ee qaranka, gaar ahaan jagooyinka laysu doorto iyo kuwa laysu magacaabo ee saddexda laamood ee dawladda iyo Guddiyada Madaxbannaan ee Qaranka.
Soo jeedin: Maadaama sida ku xusan (Q-3, L-3), loo baahan yahay in uusan Dastuurku Shareecada Islaamka ka hor imaan, waxay ila tahay sida Nusuusta/Axaadiista kusoo aroortay in labada jago ee Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha loo shardiyo midna inuusan Qof Haween ah qaban Karin. Sababta oo ah Soomaaliya waa Dowlad Islaam ah, Diinta Islaamkuna ma fasaxin in Dowlad muslim ah Qof haween ahi madax u noqoto.
Qodobka 11aad: lambarka 1aad.
Muwaaddiniinta oo dhan, iyogoo aan loo eegin lab iyo dheddig, diin, xaalad bulsho ama dhaqaale, afkaar siyaasadeed, qabiil, naafanimo, xirfad, dhalasho iyo afguri toona, xuquuqda iyo waajibaadkaba waa u siman yihiin sharciga hortiisa.
Soo jeedin: (Waa in lagu daro Qodobkaan “Marka laga reebo wixii shareecada Islaamku kala dheeraysiisay” Sababta oo ah waxyaabo badan ayey ku kala duwan yihiin Labka iyo Dheddigu Shareecada Islaamka dhexdeeda xuquuq iyo waajibaadba, sidaas waxaa la mid ah Muslimiinta iyo Gaalada)
Qodobka 13aad: Lambarka 1aad.
Soo jeedin: (waa in lagu daro qodobkaan “Hadii aan Shareecada Islaamka iyo sharciga Dalku u diidin nolosha”). Sababta oo ah waxaa dhici karta in dad dano kale leh ay u daliishadaan qodobkan Qof ay shareecada Islaamku ogolaatay in la dilo, la qisaaso ama xad laga oofiyo sida Qofka Guur soomaray ee Sinaysta.
Qodobka 15aad: Lamberka 3aad.
Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay badqabka jirkiisa waana laguma xadgudbaan.
Soo jeedin: (Halagu daro “Hadii aan Shareecada Islaamka iyo sharciga Dalku ogolaan wax u dhimista jirkiisa”). Sababta oo ah waxaa dhici karta in dad dano kale leh ay u daliishadaan qodobkan Qof ay shareecada Islaamku ogolaatay in xad laga oofiyo, sida Tuuga in gacanta la gooyo IWM.
Qodobka 17aad: Lambarka 1aad.
Soo jeedin: (Halagu daro “Islaamka”). Sababta oo ah Diin aan Diinta Islaamka ahayn loogama dhaqmi karo Dalka Soomaaliya, maadaama ay tahay Dowlad Islaam ah.
Qodobka 18aad: Lambarada 1, 2 iyo 3aad.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ra’yigiisa soo bandhigo iyo in uu qaab kasta u gudbiyo warka iyo afkaarta uu qabo, haddii aysan wax u dhimayn anshaxa bulshada iyo ammaanka dadweynaha.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu raadsado, helana afkaar.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu muujiyo hal’abuurkiisa faneed.
Soo jeeedin: (dhamaan halagu daro, “Hadii aysan wax u dhimayn Diinta Islaamka, anshaxa bulshada iyo ammaanka dadweynaha”). Sababta oo ah dhammaan waxyaabaha ku xusan qodobadaan waa kuwo fududeyn kara in lafaafiyo Ra’yi, Afkaar, War iyo Hal’abuur Diinta Islaamka, anshaxa bulshada iyo amniga dadweynaha wax u dhimaaya, ayadoo la daliilsanaayo qodobadaan.
Qodobka 28aad: Lambarka 3aad.
Ubad kastaa wuxuu waalidkiis xaq ugu leeyahay xannaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin. (Haddiise xannaanadaas uu ka waayo degaanka qoyskiisa waa in loo yeelo cid kale oo daryeesha) Isla xuquuqdan oo kale ayay lee yihiin carruurta dariiq-joogga ah iyo kuwa aan waalidkood la aqoonnin, Dawladda ayaana si gaar ah ugu xilsaaran inay xuquuqdooda ilaaliso, si buuxdana ay u helaan.
Soo jeedin: Qodobkaan qeybta dhahaysa (Haddiise xannaanadaas uu ka waayo degaanka qoyskiisa waa in loo yeelo cid kale oo daryeesha) “Halagu shardiyo in cidaas kale tahay Qof muslim ah oo aan dan kale kalaheyn ilmahaas daryeel mooyee”. Sababta oo ah waxaa dhici kara in ilmo Soomaali oo Muslim ah uu gacanta u galo cid kale oo Diinta Islaamka dhinac marisa, ayadoo loo daliishanaayo qodobkaan.
Qodobka 29aad: Lambarka 1aad.
Soo jeedin: (halagu daro “Hadii labadiisa waalid ama midkood muwaadin Soomaali ah yahay”)
Qodobka 30aad: Lambarka 5aad.
Dowladdu waxay dhiirigelineysaa sare-u-qaadidda cilmi-baarista, halabuurka iyo farshaxanka, horumarinta ciyaaraha hiddaha & dhaqanka, isboortiga iyo dhaqanka suuban ee dadka Soomaaliyeed.
Soo jeedin: (Halagu daro “si waafaqsan Diinta Islaamka”). Sababta oo ah Dastuurku ma fasaxaayo wax Diinta Islaamka ka soo horjeeda, waxaana laga yaabaa ayada oo qodobkaan la daliilsanaayo in Diinta Islaamka wax loo dhimo.
Qodobka 30aad: Lambarka 8aad.
Soo jeedin: Qodobkaan qeybtiisa dhahaysa “Arrimmahan laguma dabaqi karo dugsiyadda ay leeyihiin dadka aan Muslimka ahayn”. Hadii la ogolaado in Dugsiyo aan dad Muslim ah lahayn laga furo Dalka. Wuxuu ka hor imaanayaa Qodobka dhahaaya Diin aan Diinta Islaamka ahayn laguma faafin karo Dalka, sidaas darteeda halaga saaro meesha gabi ahaanba.
Qodobka 35aad: Lambarka 13aad.
Soo jeedin: Halagu daro “haddii uusan ahayn dembi ka soo horjeeda Diinta Islaamka iyo banii’aadaminnimada”. Sababta oo ah dadka Soomaaliyeed waa Muslimiin dhammaan Nusuusta shareecada Islaamkuna waa ku fuleysaa markasta, in Nas kale oo ka weeciya la helo mooyee.
Qodobka 48aad: Lambarka G.
Waa in ay dhowraan isu-dheelitirnaanta labka iyo dheddiga ee xilalka hoggaaminta.
Soo jeedin: (Halagu daro “si waafaqsan shareecada islaamka iyo Dastuurka Dalka). Sababta oo ah waxaa jira jagooyin badan oo Haweenku aysan qaban Karin. Loona baahan yahay in qodobkasta oo Dastuurka ka mid ahi shareecada waafaqo.
Qodobka 89aad: lambarada 1 – 4aad.
Afhayeenka Golaha Shacabka iyo labadiisa ku xigeen.
Soo jeedin: (Afhayeenka Golaha Shacabka iyo labadiisa ku xigeenba, waa in lagu shardiyaa in ay ka tanaasulaan hadii ay haystaan ama leeyihiin Jinsiyad Dal ama Dalal kale inta aysan xilka la wareegin caddeynna usoo gudbiyaan Guddiga Doorashooyinka iyo Diiwaan galinta Xisbiyada” sida loogu shardiyey madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha iyo ku xigeenkiisaba).
Qodobka 98aad: Lambarka 1aad.
Afhayeenka iyo ku-xigeenada Golaha Wakiillada Dawlad-Goboleedyada
Soo jeedin: Si dhammaan xubnaha sarsare ee Dowlada Federaalka Jamhuuriyadu maqaab iyo maamuus mideysan u yeeshaan waa in “Afhayeenka iyo ku Xigeenada Golaha wakiilada Dowlad-Goboleedyada loo shardiyo in ay ka tanaasulaan hadii ay leeyihiin ama haystaan jinsiyad Dal ama Dalal kale inta aysan xilka la wareegin caddeynna usoo gudbiyaan Guddiga Doorashooyinka iyo Diiwaan galinta Xisbiyada” sida loogu shardiyey madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha iyo ku xigeenkiisaba.
Qodobka 113aad: Lambarka 1aad.
Shuruudaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka
Soo jeedin: Shuruudaha Madaxweynaha waa in lagu daraa “waa in uu yahay Qof Rag ah”. Sababta oo ah maadaama Dowladu Islaam tahay waa in Madaxweynaheedu Qof Rag ah noqdaa, hadii kale shareecadii Islaamka ayuu ka hor imaanayaa.
Qodobka 122aad: Lambarka 3aad.
Ra’iisul wasaaraha wuxuu magacaabayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeen , wasiirro, wasiirro Dawlayaal iyo wasiirro ku-xigeen oo tiradoodu aysan ka badnaan karin laba iyo labaatan(22).
Su’aal: Tirada 22-ka ah ee meesha ku qoran, ma dhammaan Golaha wasiirada baa mise waa Tirada wasaaradaha Dowlada Federaalka ah? Mise Ra’iisal Wasaare ku xigeen ayeyse Xukuumadu yeelanaysaa?
Qodobka 122aad: Lambarka 4aad.
Golaha Wasiirada waa in ay ahaadaan xildhibaanno Golaha Shacbiga.
Soo jeedin: (waxay ku wanaagsan tahay in dhammaan golaha Wasiirada marka laga reebo Ra’iisal Wasaaraha loo shardiyo in aysan xubin ka ahayn Golaha Shacabka, taasi waxay keenaysaa in awooda dowladu noqoto mid isu dheeli tiran, hadii kale ninkasta oo Wasiir ahi wuxuu noqonayaa laba shaatile. Marna isu codeeya marna awoodiisa wax ku meelmarsada.
Qodobka 123: Lambarka 1aad.
Qofka qabanaaya xilka Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha
Soo jeedin: (halagu daro shardi gaar ah oo ah, “Qofka qabanaaya Xaafiiska Ra’iisal Wasaaraha waa in uu noqdaa Qof rag ah”. Sababtana horay ayaan usoo sheegnay oo waa mas’alo Diini ah.
Awoodda Garsoorka jamhuuriyadda
Soo jeedin: Lambarka 1aad ee Qodobkaan ha laga dhigo “Dhammaan go’aaminta iyo meelmarinta ama fulinta Xukumada garsoorka jamhuuriyaddu waa in ay ku saleysnaadaan Nusuusta Shareecada Islaamka iyo Qodobada dastuuriga ah ee lagu heshiiyey”. Sababta oo ah Maxkamadaha Dalku marka ay wax xukumaayaan dhammaan xukunkoodu waa in uu yahay mid lagu saleeyey Nusuusta Shareecada Islaamka, waana Nusuusta kaliya ee dad muslimiin ah loo ogol yahay inay u xukun tagaan. Hadii kale dhammaan Dastuurka iyo qodobada lagu heshiiyaaba waxay noqonaayaan kuwa ka hor imaanaya shareecada islaamka.
Tusaale: Hadii Qof Madax ah, Siyaasi ah, Xildhibaan ah ama qeybaha kale ee Dowlada qeyb ka mid ah uu jabiyo Qodobada Dastuurkan ee lagu heshiiyey marka la xukumaayo waxa lagu xukumaayo ma ahan Qodobada Dastuurka ee uu jabiyey ee waxaa lagu Xukumaayaa waa Nusuusta shareecada Islaamka. Sababta oo ah wuxuu jabiyey heshiis ay dad Muslimiin ah isku raaceen, qofkii heshiiskaas jabiyana wuxuu leeyahay xukun sharci Diini ah. Taasina waxay waajibinaysaa in dhammaan Qaadiyaasha Maxkamadaha dalku noqdaan kuwo aqoon dheeraad ah oo ku filan u leh Fiqiga iyo dhammmaan qeybaha Shareecada islaamka.
sbirmad [ AT@ ] hotmail.com
2 Jawaabood " Faallo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya "
Saciid Birmad says:
Wednesday, June 6, 2012 at 8:47 am
Walaale Maxamed aad baad u mahadsan tahay Runtii qoraalkaan markii aan ka qoray Dastuurka la wado hadda waxay ahayd markii ugu horeysay ee Bishii la soo dhaafay la faafiyey Marka in wax laga sii bedelay waa laga yaabaa Laakiin waa arki doonaa markastana waa cadeynaynaa wixii Khaldan Insha allah.
Mida kale walaale Xuduudaha Soomaaliya wali ma dhicin Dastuur Soomaaliya loo qoray in lagu sheegay Xuduudaha oo la yiri Xuduuda Soomaaliya waa meeshaas iyo Meeshaas, Sababtuna waxay tahay sida aad la socoto Hadii aan nahay Soomaali, Waxaa dhul nagala jiraa oo nooga maqan yahay Dalalka Ethopia iyo Kenya. Marka Hadii la xadido Xuduudaha Dalkeena oo aan meel ku ekeyno oo dastuurka lagu qoro hadhow ma suuro galeyso in aan Dowladahaas la xisaabtano oo dhul ku hseegano. marka waa sababtaas Sababta aan loo xadidio karin Xuduudaha Dalka Soomaaliya.
Saciid Birmad Cigaal
Tuesday, June 5, 2012 at 1:18 pm
asc walaal saciid
ilaahey kheyr haku siiyo,sifiican ayaad ugu hadashay qodobada qilaafsan diinta ee loo baahanyahay in wax laga bedelo.Waxa ay ila tahay dastuurkaan in noolasoo diyaariyay ee aysan qorin dad muslimiin ah,soomaali ah,muwaadiniin ah oo adoo kale ah.Dadkaan waxa noosoo dhoodhoobay, madoonayaan qof adoo kale ah oo aqoon u leh dhinacyadaan sharciga iyo diinta inay ummadaan wax u qabtaan.
Walaal midda kale,Dastuurkan laguma xusin Xuduudaha Soomaaliya.Maxaa u sabab ah ayey kula tahay??????????